kakawandisa vakaroorana matsva overthink zuva ravo rokutanga. Ivo kuridza mienzaniso yakasiyana-siyana pamisoro yavo pamusoro chii Tingangonyanya kuitika uye kuva manyemwe kushanda pachavo vasati wanyatsoita rwawana pamwe. Nepfungwa huru yokuita kuziva mumwe munhu anotora musana chigaro kuna mwoyo kana kuti kwete vari kuita zvakanaka pfungwa – Vari unobata kumeso kwavo rakawandisa, kutaura zvakawanda, kwete kutaura zvakakwana, uye mberi.
Musi wokutanga kunofanira kuva nguva nokuzivana mumwe munhu uye nokuteerera uye kuteerera zvavanotaura. Ungaita sei kuteerera mumwe munhu kana muri pamusoro zvauri kuzotaura uye chii iwe kana vasiri kuita paakanga kana iye ari kutaura? Kana uchifunga nezvazvo, uri chaizvoizvo kupedza nguva yako nezvezvandaifanira iwe achikanganwa kuti chikuru chinofanira kuva pamusoro mumwe munhu. Yaunopedza zuva rose pachako; zvipe uye kupedza nguva navo mumwe.
saka, unofanira kubuda musoro wako uye omerera chipo nguva. Ari kutii kuti unogona kunzwisisa? Chii iye kuita kuti ungada kuziva zvakawanda pamusoro? Imwe pfungwa zvakanaka kuyeuka kuti izvi zuva rake rokutanga zvakare, uye iye kazhinji sezvo huta sewe. Akabatana akakanganwa kuvhura musuo kuti imi? Kana kudhonza cheya dzenyu? Zvine iye chete sevari kutaura pacharo uye kwete anokukumbira mibvunzo? Pamunoona zviitiko izvi nemaonero kuti mumwe munhu ari huta zvakare, zviri nyore kurega kuenda mundotarira navamwe usiku akutungamirirei.
Kana uri kusagadzikana pamusoro zvakaipa mweya, chengeta vamwe mints muchikwama yako kana muhomwe. Zvingava zvakanaka kuti vamwe Kleenex kana wekumeso nemi pamwe. Haufaniri kuuya mushonga wose cabinet, asi tine zvinhu zvishoma nemi kana pedyo newe zvichabatsira iwe zvakawanda zvakanaka.
Pfungwa huru zvose izvi kupedza nguva naye zuva rako uchinakidzwa uye kunakidzwa yake kambani. Upenyu zvinoitika uye dzimwe nguva zvinhu havaendi sezvo aronga. Kana ukaramba kunyatsowana (uye mwoyo) unogona kufamba naye chero kunoitika. Izvi zvinogona musi vazhinji vokutanga. Sununguka uye kunakidzwa!